Nagarik News - दुई महिनाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता हरायो
होमपेज / समाज / देश / दुई महिनाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता हरायो
दुई महिनाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता हरायो	16 May 2013 | 10:24am बिहीबार २ जेष्ठ, २०७०
मनोज अधिकारी	Be the first to comment! 12345 (0 votes)
पोखरा - कास्कीको सराङ्कोट–५ का ७७ वर्षे पूर्णप्रसाद तिमल्सिना बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा भेटिए। उनी वर्ष दिन पहिलको बृद्व भत्ता खोज्दै त्यहाँ पुगेका थिए। दाँत झरेर बोल्नै अप्ठेरो हुँदा पनि उनी प्रजिअ यादवप्रसाद कोइरालासँग गुनासो गरिरहेका थिए,'हाम्रो गत वर्षको दुई महिनाको भत्ता खोई?'उनले बृद्धाहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै कोइरालालाई सोधे 'गाविस जिविसले दिएको छैन भन्छ। तपाईहरु सरकारबाटै आएको छैन भन्नुहुन्छ। कास्कीका हजारौं बृद्वबृद्वा, अपाङ र एकल महिलाले पाउने भत्ता कहाँ गयो?' उनले जिविस पटक–पटक धाउँदा पनि भत्ता पाउने सुरसार नदेखेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जाने चेतावनी दिए। कोइरालाले जिविसमार्फत् भत्ता वितरण हुने भएकाले बुझेर पहल गर्ने आश्वासन दिए। तर जोशिला तिमल्सिना पछि हट्ने पक्षमा थिएनन्। उनले तुरुन्तै जिविसबाट ल्याएको कागज प्रजिअलाई देखाए। पत्रमा गत आर्थिक वर्षको जेठ र असार महिनाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत रकम सरकारबाट निकासा नभएकाले वितरण गर्न नसकिएको उल्लेख थियो। उक्त कागज हेरेपछि कोइरालाले फेरी जिविस गएर भत्ताका लागि निवेदन दिन सुझाब दिएर बिदा गर्न खोजे। 'म जिल्लाकै हाकिम सिडिओ साब् कहाँ आएको छु', तिमल्सिनाले भने,'अब फेरि भत्ता माग्दै जिविस फर्किएर जान्न बरु अख्तियार जान तयार छु। भत्ता आउँछ कि आउँदैन भन्नुस् नत्र म अख्तियारतिरै जान्छु।'सरकारले वितरण गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत पाउनुपर्ने गत आर्थिक वर्षको जेठ र असार महिनाको भत्ता कास्कीमा कसैले पाएका छैनन्। हजारौं बृद्धबृद्धा, अपाडको भत्ता नपाएपछि उनी जिविस र जिल्ला प्रशासन पटक–पटक धाइरहेका छन्। आफु दुई महिनाको भत्ता वापत एक हजार रुपैयाँकै लागि धाएको नभई आफुजस्तै बृद्वबद्वाको हक स्थापित गराउन आएको उनले बताए। उनले वर्षभरलाई नून–तेल खान पुग्ने भत्ता रकम दुरुपयोग भएपछि आफु त्यसको खोजीमा हिंडेको सुनाए।'मलाई एक हजार रुपैयाँ खाँचो परेर कुदेको होइन' उनले भने,'सरकारले दिएको त्यही रकमबाट नून–तेल किनेर खाने बुढाबुढी धेरै छन्। तिनीहरुको आँशु देखेर चुप बस्न सकिन।'सरकारबाटै दुई महिनाको भत्ता आएको छैन भन्ने जिविसको जवाफले चित्त नबुझेपछि उनी पटक पटक प्रशासन धाइरहेका छन्। तिमिल्सिनाले प्रश्न गरे,'जसले रकम बाँड्नु पर्ने हो त्यही निकाय माथिबाटै आएको छैन भनेर पन्छिएको मात्र देख्छु, पहल गरेको देख्दिन्। के सरकारले हामी जस्ता बुढाबुढीको एक हजार रुपैयाँ खाएको हो?'देशभर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि सरकारबाट रकम निकासा भए पनि कास्कीमा भने गत आवको जेठ र असारको भत्ता वितरण हुन सकेको छैन। स्थानीय विकास अधिकारी ईश्वरराज पौडेल सरकारबाटै पर्याप्त रकम नआएकाले गत आवमा १० महिनाको मात्र भत्ता बाँडिएको बताए। उनकाअनुसार गत जेठ र असारको भत्ता वापत करिब ३ करोड रुपैयाँ सरकारबाट अपुग आएको थियो। त्यो रकम निकासका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे पनि सुनुवाई भएको छैन। त्यो फाइल अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको उनको बुझाई छ। जिविसले गत आवमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १८ करोड रुपैयाँ सरकारसँग माग गरे पनि १६ करोड मात्र निकासा पाएकाले पुरै अवधिको भत्ता वितरण गर्न नसकेको जनाएको छ। गत आवमा कास्कीमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने जेष्ठ नागरिक १८ हजार १ सय ६०, एकल महिला ५ हजार १ सय, विधवा (६० वर्षभन्दा कम उमेरका) ४ हजार ६ सय ५४, पूर्ण अपाङ्ग ६ सय ३०, आंशिक अपाङ्ग एक सय र विपन्न तथा दलित बालबालिका ६ हजार ८ जना थिए। उनीहरुका लागि १० महिनाको भत्ता १६ करोड ५ लाख ८९ हजार २ रुपैयाँ वितरण भएको जिविसको पञ्जीकरण शाखाकी खरिदार दुर्गा पौडेलले जानकारी दिइन्। प्रजिअ कोइरालाले भत्ता जिविसले वितरण गर्ने भएकाले यसबारे विस्तृतमा बुझेर मन्त्रालयसम्म पहल गर्ने बताए। Tweet प्रतिक्रिया